3 Nhengo dzemhuri Dzinodanidzira Kufa
Musi waOctober 24, 2008, miviri yeCycle Academy-Mutori wemusikana weJennifer Hudson amai nehanzvadzi vakawanikwa mumusha wemhuri paChicago South South. Shot kufa kwaiva amai vaHudson, Darnell Donerson, uye munin'ina wake, Jason Hudson. Asina kubva kumba aiva Julian King, mwanakomana wehanzvadzi yaJennifer, Julia Hudson.
Mazuva matatu gare gare mutumbi weJanan ane makore manomwe, muzukuru waHudson, wakawanikwa pachigaro chekupedzisira cheSUV chakamira paWest Side.
Iyewo akanga adzirwa. A .45-caliber gun yakawanikwa pedyo neSUV yakamira yakabatanidzwa kune vose vanofa. IvaSUV yakazosimbiswa kuva iyo yehanzvadzi yaHudson yakaponda, Justin King. Pfuti yakawanikwawo mune imwe nzvimbo isina chinhu munzvimbo yakadaro seSUV, mapurisa akati.
Nyaya yacho yakaita kuti nyika irambe ichicherechedza nekuda kwekurumbira wemhuri yemhuri Jennifer Hudson, uyo akakunda mukana wekunakisisa-muchengeti wechikoro Academy nokuda kwebasa rake ra2008 mufirimu "Dreamgirls." Hudson akatanga kuwana mukurumbira mushure mekunge adzingwa muchechi yechitatu yeterevhizheni tarenda ye " American Idol ."
Murume waJulia akabatanidzwa akabvunzwa
William Balfour, murume akasiyana-siyana waJulia Hudson, akaiswa mujeri zuva iro miviri miviri yokutanga yakawanikwa uye yakabatwa kwemaawa 48. Akange akazoiswa muchitokisiki ne Illinois Illinois Department of Corrections pamusoro pekupomerwa kwekupomerwa kweparole.
Balfour akaroorwa naJulia Hudson muna 2006 asi akanga aparadzaniswa panguva yekuputika.
Akakandwa kunze kwemuzinda weHudson naamai vaJulia munguva yechando muna 2007, maererano nemashoko. Akaramba kusabatanidzwa kune mhosva yeHudson uye akaramba mitemo yekuti akanga aonekwa nepfuti, asi akaramba ari muchitokisi.
Balfour akashanda makore anenge manomwe mujeri mushure mekunge apomerwa mhosva yekuedza kuuraya, motokari yekutengesa motokari uye kugamuchira motokari yakabiwa.
Akanga ari parole panguva iyo kuurayiwa kwakaitika.
Balfour akasungwa paHarareville Correctional Center apo aive akabatwa pamhosva dzekupomerwa kweparole . Vatambudzi vaidavira kuti kuputika mumusha wemhuri yeHudson kwakaguma nekukakavadzana Balfour aiva naJulia pamusoro peumwe murume. Vatsvakurudzi vakaziva kuti Balfour akaedza kutora musikana waimbova musikana, Brittany Acoff-Howard, kuti amupe neanbi wenhema kwezuva iro kuurayiwa kwakaitika.
'Ndiri Kuuraya Mhuri Yenyu'
Maererano nedare remabhuku, Balfour akatyisidzira kuuraya nhengo dzemhuri yaHudson panguva dzinenge makumi maviri nemaviri vasati vaurayiwa muna Gumiguru 2008. Gweta rezvematongerwo enyika, James McKay, vakataura zvingangovhiringidza zvakatanga nguva pfupi mushure mekunge Balfour nemudzimai wavo Julia Hudson vakaputsa uye vakabuda yeimba yemhuri.
McKay akati Balfour akaudza Julia, "Kana iwe ukandisiya, ndichaenda kukuuraya iwe, asi ini ndichauraya mhuri yako kutanga, iwe uchava wekupedzisira kufa."
Mushure mokupindura mibvunzo pamusoro pezivo yavo yemuimbi uye actress Jennifer Hudson, 12 jurors uye dzimwe nhanhatu dzakasarudzwa nekuda kwekutongwa.
Vangangodaro jurors mukutongwa vakapiwa mibvunzo yakabvunza kana vaiziva basa raHurson, kana vaigara vachitarisa "American Idol," uye kunyange dai vakanga vari nhengo dzeWight Watchers, chirongwa chekurasikirwa kwehuremu iyo Hudson ari mutauriri wevanhu vakakurumbira.
Dare rejeri raiva nevakadzi gumi nevarume vasere uye raive nerudzi rwakasiyana. Paanenge achimirira kuvhura zvinyorwa kuti atange mwedzi gare gare, Mutongi Charles Burns akakumbira vakuru vacho kuti varege kutarisa terevhizheni "American Idol," nokuti Hudson yakanga yakarongwa kuti ionekwe pachiitiko chinotevera.
Panguva yekuvhura zvinyorwa, Balfour mumiririri wezvidziviriro akaudza jurors kuti mapurisa akamutamburira mhosva iyi nokuti vakanga vari mumanikidziro ekugadzirisa nokukurumidza izvo zvavaiziva zvaizova nyaya yakakwirira, nekuda kwaJennifer Hudson mukuzivikanwa.
Mutongi wezvemhosva Amy Thompson akaudzawo jurisa kuti DNA yakawanikwa pfuti neminwe yezvimwe zvinyorwa zviri muSUV, umo muviri waJulian wakawanikwa mazuva matatu gare gare, haana kufanana neBalfour.
Balfour haana mhosva nemhosva uye akati akanga asina nzvimbo pedyo neimba apo kuurayiwa kwakaitika.
'Hatina Kuda Mabatiro Aaiita'
"Hapana mumwe wedu aida kuti awanikwe naye [Balfour]," Jennifer Hudson akaudza jurisa, "Hatina kufarira kuti akamubata sei."
Imwe hanzvadzi yaJennifer Hudson Julia akapupura kuti Balfour aiva negodo zvokuti aizototsamwira apo mwanakomana wake Julian akatsvoda amai vake. Aizoudza mukomana wemakore manomwe, "Ibva kumudzimai wangu," akapupura.
Brittany Acoff Howard akapupura kuti William Balfour akamukumbira kuti amufukidze nokuda kwaOctober 24, 2008, zuva rehupenyu hwemhuri yeHudson vakaurawa. Howard akaudza jurors kuti Balfour akabatsira kumutengesa chipfeko chembambo uye akamubata sehanzvadzi duku.
"Akandiudza kuti kana mumwe munhu akakubvunza, ndave kumadokero zuva rose," akadaro Howard. Mukupindura kune uchapupu huripo hwehupupuriro, akati Balfour akanga amubvunza kuti ataure nhema kwaari.
Kwete DNA, Asi Gunshot Residue
Illinois State Police muongorori muongorori Robert Berk akaudza vakuru vehurumende kuti zvigaro zvepfuti zvakawanikwa pachitsigira chemotokari yaBalfour nekudenga kweSurban. Kupupura kwake kwakatevera kune mumwe muongorori, Pauline Gordon, uyo akati hapana maitiro eDNA yaB balfour akawanika pane zvombo zvekuuraya, asi izvozvo hazvina kureva kuti haana kumbobvira apinda pfuti.
"Vamwe vanhu vanoderedza masero echechi nokukurumidza," Gordon akati. "Magirofu angadai akapfeka."
Nhengo yejeri yakaronga maawa 18 asati awana Balfour ane mhosva pamatatu ekuuraya uye mamwe mimwe mhosva pamusoro pekufa kwaOctober 24, 2008, Darnell Donerson; Jason Hudson; uye mukomana wake ane makore manomwe Julian King.
Mushure memutongo, nhengo dzejeri dzakatsanangura nzira yavakashandisa munguva yavo maawa anenge makumi masere ekufunga.
Chokutanga, vakavhota kana chapupu chimwe nechimwe chakanga chakavimbika kana kwete. Zvadaro vakagadzira nguva yemhosva yekuenzanidza nayo neanbi balfour avo vakatsanangurwa panguva yekutongwa.
Apo jweta rakapoteredza kutora vhoti yekutanga, raiva 9 kusvika ku3 mukuda kwekutenda.
"Vamwe vedu vakaedza zvakanakisisa kuti tiite asina mhosva, asi chokwadi chakanga chisipo," juror Tracie Austin akaudza vatori venhau.
Asati atongerwa, Balfour akabvumirwa kutaura. Mariri, akapa ruregerero kumhuri yeHudson asi akaramba akachena.
"Minyengetero yangu yakadzika inouya kuna Julian King," Balfour akati. "Ndakamuda, ini ndichiri kumuda, handina hanya kukudzwa kwako."
Pasi pemitemo yeAlliance, Balfour akatarisana nehutano hupenyu husina mvumo yekutongerwa kuurayiwa kwezvizhinji. Mutemo weku Illinois haubvumiri rufu rwechirango chemhosva pane chero mamiriro ezvinhu.
"Iwe une mwoyo weusiku husiku," Mutongi Burns akaudza Balfour pamusana pekutonga kwake mhosva. "Mweya wako wakaita sengozi sechinhu chakasviba."
Balfour akatongerwa upenyu husina mhosva.
Grammy uye Academy Award-Mukunda Hudson wakabvarura ndokutenderera papfudzi rake rekuda sezvo chirevo chejeri chakaverengwa. Aipinda zuva rega rekutongwa kwezuva 11.
Mutsamba, Jennifer nehanzvadzi yake Julia vakavonga .
"Takanzwa rudo nerutsigiro kubva kuvanhu pasi rose uye isu tinoonga zvikuru," akadaro mazwi. "Tinoda kuwedzera munyengetero kubva kumhuri yeHudson kuenda kumhuri yeBalfour. Tose takatambura kurasikirwa kukuru mudambudziko iri."
Vati ivo vari kunyengetera "kuti Ishe achakanganwira Mr. Balfour zvezviito zvakashata uye anounza moyo wake mukupfidza mamwe zuva."
Balfour Inopfuurira Kuramba Kubatanidzwa
Muna February 2016, Balfour vakataurirana vakabvunzurudzwa na Chuck Goudie weWLS-TV, nzvimbo yehanzvadzi yaAbc7 muChicago. Iyi ndiyo hurukuro yake yekutanga yakabvunzwa kubva pakutenda kwake. Panguva yemubvunzurudzo, Balfour akataura kuti chivimbo chake chakanga chiri pamusana pekurangana kukuru kwaisanganisira mapurisa, zvapupu, uye magweta uye kuti akanga asina chokuita nehuurayi.
Paakabvunzwa kuti nei Julian Mambo ane makore manomwe akaurayiwa, mhinduro yaBalfour yakanga ichioma.
Balfour: "... Ingadai yakange iri nzvimbo isina kunaka panguva isina kunaka, munhu anouya ikoko kuti auraye munhu haauraye avo vanouraya Kana iwe uri chapupu uye iwe unogona kuziva munhu, vanogona kuti ini akamuuraya nokuti aigona kundiziva ini asi handizvo. "
Goudie: "Uyu mukomana ane makore manomwe angadai akakuziva iwe."
Balfour: "Izvo zvandakataura kare, kuti aigona kundiziva uye ndicho chikonzero akaurawa kana kuti akamuuraya nokuti aigona kumuziva.Ezvo Julian akanga akachenjera, aikwanisa kuyeuka zviso."
Pakupindura kubvunzurudzwa, Dhipatimendi reMapurisa eChicago yakati, "CPD inomira zvakasimba mushure mekutsvakurudza kwedu kwakange yakabva kune zvokwadi uye uchapupu muhupombwe husina musoro."
Balfour iye zvino anoshumira nguva yake mu Stateville Correctional Center pedyo naJoelet, Illinois.
Nhoroondo yevana Predator Nathaniel Bar-Jona
Nhoroondo ye Larry Swartz uye The Sudden Fury Murders
'Kana,' 'Lorsque,' 'Lors de,' uye 'Pendant': Chii chakasiyana?
Kutumidzwa - Kuita Kushungurudzika uye Kuongororwa muSt Class
Chirungu Kudzidzisa Mitsanangudzo Inotsanangurwa
Hondo Yenyika I: Munda Marshal John French
Ndarama Yakasimba Yakananga: Ndinokuda Kuti Udzoke
Mon eye! - Chirevo cheFrench Chitsanangurwa
Seneca Falls Zvisarudzo: Kodzero dzevakadzi dzekuda muna 1848
Kuwana Mukana Wokutungamirira Mudzidzisi Kucherechedza
Apo maJermany Anoenda Mazororo
Icho Chinorevei Kutaura "Ndinotenda" Chimwe Chinhu Chaichokwadi?
Ndima dzeBhaibheri Pamusoro Peupombwe uye Ufeve
Nzira Yokudzidzisa Sei Munhu Mukuru Kuti Ashambire?
Tsanangudzo uye Mienzaniso yeChirungu Chirungu
Mashoko echiLatin uye Zviratidzo mumutauro weChirungu
Dzidza Nzira Yokushandisa Zvakakodzera Shanduro yeSpain 'Ni'
Super Chipiri Tsanangudzo
Kuuraya A Mockingbird Yokudzidza
Nei Wipers My Smearing?
Kutsika Mitemo neHurumende
Top Top 10 Pop Songs - Zuva 2002